E14 X555-54 High Temperature Nemishonga muchoto Lamp wokuisira - China Haimen Xinrong Magetsi
E14 X555-54 High Temperature Nemishonga hovhoni Lamp wokuisira
Haimen xinrong yemagetsi co., Ltd iri specialized mukubudisa nekuve muchoto rambi pedhi, iro rinoshandiswa kuti gasi muchoto, yemagetsi muchoto, yakachena hwemvura muchoto, hwemvura muchoto uye zvichingodaro. Nomufananidzo wedu matsva chigadzirwa: asi E14 muchoto rambi pedhi of X555-54 akatevedzana iyo rakakamurwa mhando nhatu: X555-54H, X555-54V uye X555-54X.They vane hunhu kumusoro tembiricha nemishonga. fekitari yedu yapfuura ISO: 9001: 2000 yepamusoro hurongwa advertising, chigadzirwa ane CE, ROHS uye othe ...
Haimen xinrong yemagetsi co., Ltd iri specialized mukubudisa nekuve muchoto rambi pedhi, iro rinoshandiswa kuti gasi muchoto, yemagetsi muchoto, yakachena hwemvura muchoto, hwemvura muchoto uye zvichingodaro. Nomufananidzo wedu matsva chigadzirwa: asi E14 muchoto rambi pedhi of X555-54 akatevedzana iyo rakakamurwa mhando nhatu: X555-54H, X555-54V uye X555-54X.They vane hunhu kumusoro tembiricha nemishonga. fekitari yedu yapfuura ISO: 9001: 2000 yepamusoro hurongwa advertising, chigadzirwa ane CE, ROHS nemamwe advertising, tinotarisira pachokwadi mberi kune epamba uye dzimwe vatengesi kubvunza, basa OEM uye ODM mirairo. Panguva iyoyowo, tine makore 20 muchoto maindasitiri ruzivo, saka kuti tine kunzwisisa maindasitiri zvigadzirwa, chigadzirwa kukura kunyatsoshanda zvakadzama.
girobhu racho Type
E14 220-240V 15 / 24W hovhoni girobhu racho
Mushaba Lime Glass
Ceramic Lamp pedhi
Uchitikurudzira Dimensions (㎜)
Welcome kutenga kana Wholesale mukuru yepamusoro uye rakasimba mutenge e14 rambi pedhi yakaitwa China kubva fekitari yedu. Xinrong Electric ndomumwe yokutungamirira vanogadzira bhizimisi zvakadaro China. Zvino customized basa vakasununguka mharidzo iripo.
Previous: E14 X555-43 hovhoni Lamp Light Mabumba zvigadziko wokuisira High Temperature Steamer microwave
Next: E14 X555-54G Round muchoto Lamp wokuisira hovhoni Light Fitting
Round Head E14 wokuisira
Round Head E14 wokuisira For Sale
Round muchoto Lamp wokuisira For Sale
Round muchoto Light wokuisira
Round muchoto Light wokuisira For Sale
Wholesale Round muchoto Lamp wokuisira
E14 X555-80H Round muchoto Light wokuisira T300 Halogen
G9 WGB-A Rectangular muchoto Mwenje Light Mabumba T300 ...
E14 X555-58 Steamer Light wokuisira Ceramics Holde ...
E27 X666-80H hovhoni Lamp wokuisira T300 E27 Steamer ...
G9 WGB-A muchoto Steamer Mwenje wokuisira CE T300 High ...
G9 WGA-40 Steamer muchoto Lamp wokuisira Cover vaipupurirwa